Taariikhda My Butros » Marka waa "Right Time" Si aad u raacdeeya xidhiidh cusub?
Hadal heynta badnaa waa adag. Cid kasta oo xiriir dhamaado ama sababta ay u dhamaatay, waxay noqon kartaa waqti dareenka socda dhamaadka iskaashi. Sidaas aad hal mar is arkaysaa iyo dunida shukaansiga dhan dareemi kartaa xoogaa yar oo ka turjimaysa marka hore.
Waxaa jira jeer laga yaabaa in aad la yaabi marka aad bilowdo waa inuu ku soo bilowdo shukaansi mar kale iyo nasiib, ma jirto si fudud oo lagu dhibaatadan. Qof kastaa wuxuu wax ka qabtaa burburka ku dhaca xawaare u gaar ah sidaa darteed ma jiro waqti cayiman oo la raaco oo la xiriira raadinta xiriir cusub burburka ka dib.
Oo sidaas waa inaad diyaar u ah inay bilaabaan xidhiidh cusub, ha shukaansi bilow oo keliya? Halkan waxa ku yaala dhawr talo oo kaa caawinaya in aad ogaado haddii aad ku sugantahay Jid toosan:
Sii naftaada waqti
Waxaan ahay ma qeybiso been-hadal heynta badnaa nuugi. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku foorarsato booska uurjiifka ee sariirtaada adigoo wata jibbaar jalaato ah iyo Netflix shirkadda muddo. Qaadashada waqti ay murugoon dhamaadka xiriir waa caadi. Marka ay timaado in dareenka culus sida xunuun, waxa ay qaadato waqti in ay daweeyaan nabaro aad. Waxkaqabashada weyni ka ah hab caafimaad iyo qaan waa habka ugu wanaagsan ee ay u qabtaan iyo sii noloshaada.
Shaqee naftaada ku
Inta badan markii ay xiriir la joojiyo aad hadhay su'aalo walba. Maxaa qalad ah u baxay? Waxay ii ahayd qalad? Maxaan sameyn lahayd? Jooji naftaada ciqaabta ee xiriirka aad ku fashilantay iyo joojiyo ciyaarta eedda, sida darteed taasi ma in aad kalsooni ka wanaagsan. Aqbale in xiriirka ka shaqeyn weysay oo aan ka dhalto ee dareenka Faraha kaa caawin doona inaad guurto on. Wax ka barashada khaladaadkii waa habka ugu fiican in la ogaado in aad waxa aad rabto out of xiriir iyo waxa aan sameeyo.
Markan qaado in ay isku dayaan in aad naftaada wanaajiyo oo isku day wax cusub. Ever lahaa hiwaayad aad u xiiseeneyso laakiin marnaba isku dayeen? Hadda waa wakhti ku habboon! Ka qeyb qaado koorsooyinka luuqadda ah, iskaa wax u qabso munaasabad sadaqo ah, ama xitaa ordo maratoon. Waxaa jira wadiiqooyinkaan aan dhamaadka lahayn. Isku day wax cusub oo kaa farxinaya oo kaliya naftaada diirada saara.
Dhammaan xiriirka jaceyl leh aad hore yaree
Dadka qaarkood waxaa ay awoodaan in ay sii saaxiibo ka dib weyni ka ah, laakiin haddii aad dareentid in aad kaliya ma ka heli kartaa iyaga u taliya iyo sii dayaan inay ka soo shaqeeyaan waxyaabo, laga yaabaa in aad rabto in aad ka gooyay dhan la kulmo, xitaa haddii ay kaliya ku meel gaar ah. Way adag tahay inaad ka guurto on goorta aad naftaada rajo been ah in weli ay jirto fursad dib loo daari lahaa xiriirka. Ma jiro wakhti dambe hoos wadada si ay u noqdaan saaxiibo, laakiin markii weyni wali waa cusub oo aad maskaxda, waxa kaliya, waxaa fududaan karta in aad meel fog.
Iska ilaali inaad ku celiska aheyd ka Digtoonaayeen
The qaabka xiriirka kubadii waa caado in loo baahan yahay in si degdeg ah loo jebiyo. Waxaad naftaada u sheegi karaan xiriirka ma noqon doonto kubad caadiga ah, laakiin waxa ay noqon karaan sida in si kasta, inkastoo dadaalka aad ugu fiican. Waxaad laga yaabaa in weli la tiicaysa dhawr aad xiriir la soo dhaafay oo dhan dareen culus oo ku lug leh, sidaas waxaa laga yaabaa inay noqdaan wareer keenaya kuwa dareenkooda jir galay xidhiidh cusub.
Marka ay timaado in kubadii flings (I.E. galmo la-hawlgalayaasha random, saaxiibada la faa'iidooyinka, iwm), waa in kaliya in laga fogaadaa. Hookup A degdeg ah ugu muuqan kartaa fikrad fiican, laakiin waxay kaliya ma yihiin. Isticmaalka galmo caadi ah oo macneheedu yahay dareemayaa cidlo ka yar ka dib markii weyni ka ah astaan ​​u ah in ay leeyihiin saamayn ka soo horjeeda; aad doonto in ka badan ayay u badan tahay dareemaan intan waa ka xumaan ka dib wax walba waa la sheegay oo lagu sameeyey. Naftaada badbaadi xunuun dheeraadka ah iyo gudbin xiriirka shabaqa / flings.
Waxaad si dhab ah u dareemaan diyaar u ah inay horay u socdo
Marka aad mar dambe ma leedahay ka dhalto dareenka jacaylka iyo khasaaro dhinaca ex, ayaa obsessively joojiyay hubinta ay bogga Facebook (ma iska aad haysan), iyo joojiyey siinta naftaada rajeynayaa u heshiisiinta aad diyaar u tahay in uu horay u socdo waxaa laga yaabaa in.
Innaba ha maqlina dadka kugu dhow oo aad u sheegto in aad bilowdo shukaansi mar kale sababta oo ah go'aan in ugu dambeyntii waa in adiga. Marka aad dareento in ugu dambeyntii diyaar u tahay inay la kulmaan qof cusub waa marka waa in aad bilowdo shukaansi. Tani waa noloshaada, ka dib dhan, markaa ha isku dayin inaad qanciso asxaabtaada iyo qoyskaaga adoo dib ugu soo boodaya ciyaarta shukaansiga markii aadan weli diyaar aheyn.